Uyenza njani okanye ingasebenzi ukuhanjiswa kweefowuni kwiselfowuni yakho ye-Android | I-Androidsis
Ungayenza njani okanye ungasebenzi ukuhanjiswa kweefowuni kwi-Android
UEder Ferreño | | Iiselfowuni, Tutorials
Ukuthumela umnxeba yinto enokuba luncedo kakhulu kwiimeko ezininzi. Ukuba ifowuni yakho ye-Android iyalungiswa kwaye ufuna ukufumana iifowuni zakho kwenye inombolo, yinto esinokuyisebenzisa. Okanye ukuba uza kuphuma emsebenzini wakho, kwaye ufuna ukuba iifowuni ziye komnye umntu okanye kwifowuni yakho, iimeko zininzi. Ke ngoko, sinokuyisebenzisa okanye siyenze isebenze kwifowuni.
Ngale ndlela, Siza kulonwabela eli nqaku kwifowuni yethu ye-Android. Into ebalulekileyo ngaphambi kokuba isebenze kukujonga ukuba le nkonzo ibandakanya iindleko ezongezelelweyo kwi-invoyisi yethu. Kuba kukho abaqhubi abahlawula ngaphezulu ukuyisebenzisa.
1 Yenza ukuhanjiswa kweefowuni kusebenze kwi-Android
2 Ungayenza njani ingasebenzi ukuhambisa umnxeba
Yenza ukuhanjiswa kweefowuni kusebenze kwi-Android
Uninzi lweefowuni ze-Android zihlala zinika amandla okwenza lo msebenzi. Nangona inyani kukuba ixhomekeke kwimodeli nganye. Ke kunokwenzeka ukuba ifowuni onayo ayikuvumeli ukuba usebenze ngokuthumela umnxeba. Imiyalelo inokwahluka ngokuxhomekeke kuhlobo ngalunye okanye imodeli nganye, nangona amanyathelo ekufuneka elandelwe ahlala efana kwiimeko ezininzi.
Okokuqala kufuneka siye kwisicelo sefowuni, esiyifumana kwiscreen sasekhaya sefowuni yethu ye-Android. Nje ukuba ungene ngaphakathi, kuxhomekeke kulwakhiwo kunye nemodeli, kungafuneka ufake icandelo leefowuni okanye imenyu. Kwiimodeli zeHuawei kufuneka singene kwimenyu kwisicelo sefowuni. Emva koko sicofa useto.
Ngaphakathi kweli candelo leseto siya kufumana uthotho lwezinto onokukhetha kuzo, phakathi kwethu esifumana umnxeba wokudlulisela phambili. Ke kufuneka sicofe olu khetho, lolona lunomdla kuthi ngalo mzuzu. Ngaphakathi kweli candelo sifumana iindlela ezahlukeneyo, eziphinda zixhomekeke kwifowuni nganye. Olunye uphawu lubonisa ukuba kunokwenzeka ukusebenzisa ukuhambisa iifowuni okanye iifowuni, ngelixa ezinye zikuvumela ukuba umisele iimeko zokusebenzisa le ndlela (uxakekile umgca, akukho mpendulo yokuphendula, njl.
Kule meko, Siza kuyicwangcisa njengoko kufanelekile kuthi. Ukuba sifuna ukwenza oku kuthunyelwa kwefowuni kwi-Android rhoqo, okanye kuphela kwiimeko ezithile. Iya kuthi emva koko isibuze ukuba singene kwinombolo yefowuni apho sifuna ukuphambukisa khona iifowuni.
Nje ukuba oku kujongwa kulungiselelwe ukuthanda kwethu, singashiya le menyu. Inkqubo igqityiwe ngokupheleleyo kwaye kufanele ukuba sele isebenza. Singayijonga ukuba sibiza inombolo yethu eyahlukileyo.
Ungayenza njani ingasebenzi ukuhambisa umnxeba
Ukuba siyisebenzisile, kwaye emva kwethutyana asidingi kusebenzisa ukuhambisa umnxeba kwifowuni yethu ye-Android, kufuneka siqhubeke ukuyikhupha. Inkqubo ayinayo imfihlakalo nantoni na, kuba amanyathelo ekufuneka siwalandele ayafana nala siwenzileyo ukude kubengoku. Ke ngekhe ubenangxaki kule nto. Kuya kufuneka ufake isicelo sefowuni.
Siphindela kwimenyu yesethingi okanye enye ehambelana nayo kwifowuni yakho kunye nokufikelela kukhetho lokuhambisa umnxeba. Siza kubona ukuba iphuma sele yenziwe yasebenza, kwaye konke ekufuneka sikwenzile emva koko kukuyenza ingasebenzi ngokupheleleyo. Ke, ayisayi kusebenza kwifowuni yethu ye-Android. Nangona le ndlela ingahlali isebenza kubasebenzisi.
Kukho iimeko ezininzi apho, ngaphandle kokwazi izizathu kakuhle, kungasebenzi. Ukuthumela umnxeba kusasebenza kwifowuni. Ukuba oku kwenzekile kuwe, kukho esinye isisombululo esilula kakhulu sokukwenza ungasebenzi kwifowuni yakho. Kufuneka sibuyele kwisicelo sefowuni. Apho, siqhubeka nokumakisha ikhowudi, eya kuthi isincede siyiphelise. Kuya kufuneka ufake le khowudi: * # 21 # kwaye ucofe umnxeba ongezantsi.
Emva kwemizuzwana embalwa, umyalezo uza kuvela kwiscreen usazise ukuba ukuhambisa umnxeba kwifowuni yethu ye-Android kuyekisiwe ngokupheleleyo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Tutorials » Ungayenza njani okanye ungasebenzi ukuhanjiswa kweefowuni kwi-Android
I-Bubble Pop, umdlalo olula wokulwa isithukuthezi
Ungazi njani ukuba zeziphi izicelo kwifayile yecebo lokucoca i-Android